Auto Muviri Kugadzirisa Kudzidzisa |
Chisles & zvibhakera
Kucheka Maturusi & Saha
Glue Pfuti & Zvimiti
Sando & Pry Mabhawa
Mapanga & mashizha
Emergency & Chengetedzo
Kuchenesa & Kutonhora
Chishandiso Kuchengetedza & Bhenji Rekushanda
YeMunhu Yekudzivirira Midziyo
Car Wash & Kuchenesa
Ratchets & zvigadziko
Ngoro & Kudhonza
MUNDA & OUTDOOR
INDUSTRIAL & KUSVIKIRA ZVAKANAKA
E - KATALI
Auto Muviri Kugadzirisa Kudzidzisa
Kana iwe uine mota uye uchizviita-iwe-pachako, iwe uchave uchitsvaga auto auto kugadzirisa maitiro ekutungamira anobatsira. Inyika ine hutsinye kunze uko uye mota yako iri kupfuura zvingangoitika kuti unoona madhindindi, kukwenya, mazino kana zvakatonyanya paunenge uri wako.
Dzimwe nguva, kukanda kwakadzika kunogona kudzimwa nekushandisa yakanaka kwazvo sandpaper uye nemvura yakanyoroveswa chipanji. Shandisa iyo sandpaper kuminhenga iyo kukwenya pasi kusvikira yanzwa kutsetseka. Kana iwe uine rombo rakanaka, muvare unenge usinganyanyo kuoneka kumwe kugadzirisa, kusanganisira kupenda, hakuzove kuri kudikanwa.
Kana kukwenya kwacho kwakadzika ungatofanira kujecha kumberi. Zvinosuruvarisa, kamwe chete kusvika pano, kugadzirisa nzvimbo yakakanganiswa kunowanzodiwa. Kana iyo nzvimbo ine jecha ikaguma pazasi pepasi peimwe pendi, unogona kuvaka nzvimbo yacho zvakare nekushandisa muviri putty kana kuzadza. Wobva wanyorova jecha iyo putty kana kuzadza kuti unyorove pamusoro.
Kana iwe uine chinetso ingori dhi yakapusa isina kukuvara kwepende, unogona kushandisa yakajairwa yekugezera plunger kuti ubudise iyo kumusoro. Kana iyo dendi isingakwanise kuburitswa zvizere, kupenda kuchave zvakare kungave kuri kudikanwa, asi tanga wazadza nzvimbo yacho ne putty kana kuzadza wozoisa jecha pasi payo padenga.
Kana iwe uchifanira kutsiva chikamu chemuviri chese chakagadzirwa nesimbi, kugadzirisa kwacho kunenge kwakati omei. Iwo chaiwo maturusi achasiyana zvichienderana neyako chaiyo mota, asi zvimwe zvakajairika maturusi iwe auchazoda ndeaya:
• Seti yezvipanera
• Ratchet uye seti yemasokisi
• Mupemhi kana chifukidzo
• Magirazi ekuchengetedza
Iyo yekufema kana mask, magirazi ekuchengetedza uye magurovhosi ndeyekuvimbisa kuti haufeme mune chero zvinokuvadza, uye magurovhosi ekukudzivirira kubva kumipendero yakapinza.
Ongorora zvakakanganisika uye uone kuti ndezvipi zvikamu zvauchazoda kuti upedze kugadzirisa. Chero chikamu chauchazoda chinogona kutengwa padare rekuchengetedza, zvikamu zvevatengesi kana yekutengesa mota. Wongorora chikamu (s) kuti uone maturusi chaiwo anodikanwa kuti uite basa.
Paunongotsiviwa, jecha chikamu chitsva ne150 kusvika ku220-grit sandpaper kusvikira iyo nzvimbo yatsetseka uye isina kukwenya, wobva watanga nekuipenda. Ita shuwa yekuvhara chero nzvimbo dzinogona kuwana yekutanga kana pendi dzadzo usati waenderera. Mune zvimwe zviitiko, chikamu chinofanirwa kuve chepakutanga uye kupendwa kubva pamotokari. Kana zvirizvo, bvisa chikamu chemuviri chakakuvadzwa uye uteedzere nhanho dzakapfuura neiyo nyowani.
Shandisa sandpaper kubvisa chero zvidimbu zvakarembera, wobva watora jira re fiber uye wotema chidimbu padiki padiki pane iro gomba raunoda kuzadza. Sanganisa iyo resin uye yakaoma, nyudza iyo fiber jira mumusanganiswa uye wozokwevera jira kunze. Bvisa chero musanganiswa wakawandisa woisa jira nyoro pamusoro pegomba. Shandisa banga re putty kutsvedza jira kusvikira rave sandara sezvinobvira pamusoro pegomba. Kana zvichidikanwa shandisa imwe nhete yemachira kuti iwedzere nzvimbo yacho. Ipa jira nguva yekuoma uye kuomesa, wozoiseta pasi kusvikira nzvimbo yatsetseka. Tarisa kuti zvakaenzana here. Chero nzvimbo isina kudzika inogona kubviswa nemuviri putty kana mupurasitiki. Jecha wobva watarisa zvekare kuti uve nechokwadi chekuti pamusoro pakaenzana. Tsvina primer pane iyo nzvimbo uye penda.
Nepo uchityisidzira uye kazhinji uchisiyiwa zvakanaka kune nyanzvi, ita-iwe-wega auto kugadzirisa muviri hazvireve kuti uri kunze kweiyo renji repamba makanika. Uine iyi-yekutungamira, unogona kuona kana wagadzirira kuyedza ruoko rwako pakugadzirisa muviri wemota kana kwete.
Zvishandiso zvaunofanirwa kuve nazvo mubhokisi rako rematurusi
Nei Uchifanira Ratchet Wrench?